यो परियोजनाको सुन्दर पक्ष के छ भने यसमा अहिले चारवटा निकायको समन्वय बलियो गरि रहेको छ । यसमा सर्वाङ्ग हस्पिटल र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरिसकेको छ त्यसमा रहेर हामी गैर नाफामुलक संस्थाले काम गर्दैछौं, अर्को यो अवस्थामा यो समस्या सबैको हो भनेर राजनैतिक पृष्ठभूमी र योगदान पुराएको व्यक्तित्वको हामीलाई साथ छ ।
काठमाडौं –नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले तीन सय शैयाको अक्सिजनयुक्त आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
एक्यानले हल्का लक्षण देखिएका कोभिडका बिरामीलाई लक्षित गरी नार्गाजुन–१ इचंगुनारायणमा अक्सिजनको सुविधा सहितको आइसोलेसन केन्द्र संचालन गरिने एक्यान अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले जानकारी दिए ।
‘यो महामारी नियन्त्रणमा सबैको भूमिका आवश्यक छ, व्यापारी तथा निजि क्षेत्रले नाफामात्र हेर्नु हुँदैन, संघ संस्थाले अल्छी र डराउनु हुदैन र जनता आत्तिनु हुँदैन ।’ अध्यक्ष वाग्लेले भने, ’ सबैको संयुक्त साझेदारी र भरोसामामात्र यो प्रलय टर्न सक्छ नत्र भने सबैले आ आफ्नो फाइदा र स्वार्थमा सहयोग जुट्न र परियोजना सुरु गर्न गाह्रोपर्दो रहेछ।’
उनले दश दिनसम्म आइसोलेसनमा राखेर नेगेटिव भए पछि घर फर्काउने उद्देश्यका साथ नीजि अस्पताल र नेपाल सरकारको सहयोगमा एक्यानले अक्सिजनको कमिले हाललाई ५० शैयाबाट आइसोलेसनको सुरुवात गरिने बताए ।
‘हालको अवस्थामा हल्का लक्षण भएका समेत अस्पतालमा आपत्कालिन सेवा मार्फत बिरामी भर्ना भएर आइसियू ओगटिरहेका छन तर आइसियू आवश्यक पर्ने निमोनिया हुनलागेका÷भैसकेका, उच्च चापमा अक्सिजन चहिने बिरामिले आइिसयू र भेण्टिलेटरको अभावमा मर्नु परेको अवस्था छ। ’ उनले भने, ’समयको माग भनेको अक्सिजन युक्त आइसोलेसन केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेभएकोले हामिले यो पहलको सुरुवात गर्ने अन्तिम अवस्थामा छौ।’
अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संघ संस्था, निजि क्षेत्र, राजनैतिक दल, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण देश विदेशमा हुने नेपालीहरू सबैको सहयोगमा हामी यस्ता आइसोलेसन बार्ड निर्माणमा लागे अस्पतालका आइसियूको चापलाई कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
आइसोलेसन सेन्टर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, यसको विषयमा छोटोमा जानकारी दिनुस् न ?
सर्वाङ्ग हस्पिटलसँगको प्राविधिक सहयोग र समन्वयमा तीन सय बेडको निशुल्क आइसोलेसन सेन्टर सुरु गर्दै छौं । जुन नार्गाजुन नगरपालिका वडा नं १ इचंगुनारायणमा रहेको छ । चिकित्सकको डाइट प्लान अनुसार दिनको चार पटक खाना, खाजा र अक्सिजन सहतिको बेड रहन्छ । आवश्यक परेको अवस्थमा चिकित्सकीय सुविधा रहन्छ । आइसोलेसनमा क्रिटिकल बिरामीलाई सेवा दिने अवस्था रहन्न । संक्रमित भएका तर सामान्य अवस्थामा बिरामीलाई आइसेलेसनमा राखिने व्यवस्था छ ।
आइसोलेसनकै आवश्यता महसुस कसरी गर्नुभयो ?
अहिले कोरोनाको महामारीको कारण सामान्य अवस्थाका बिरामीले पनि अस्पतालमा बेड ओगटेर बसेको अवस्था पनि छ । अर्को तिर क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीले भेन्टिलेर र आइसियूको अभावमा ज्यान गुमाउने अवस्थामा छ ।
हामीले यो योजना अनुसार कम्तिमा अक्सिजन सहितको बेडमा राख्न सकिने अवस्थाका बिरामीलाई राख्न सके अस्पतालको चापलाई कमी गर्ने र यसबाट अन्य जोखिम अवस्थामा बिरामीले उपचार पाउन सक्छन् भन्ने ध्ययेले यो अभियान चलाएका हौं ।
अहिले हामीले तीन महिना संचालन गर्ने र आवश्यकताको आधारमा समय थप्ने योजना छ । यो योजनालाई संचानलनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप पौडेलले ५० वटा अक्सिजन निरन्तर व्यवस्थापनका लागि प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, उहाँले दिएको आँट भरोसाका कारणले पनि अगाडि बढ्न हौसला मिलेको हो ।
महामारी भित्रिएको डेढ वर्ष पुगिसक्यो, एक्यानले यति ढिलो आफ्नो सक्रियता किन महसुस गर्यो ?
पक्कै पनि । हामी महामारीको समयमा कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा सामाजिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छौं । गतवर्षको लकडाउनमा सरकारी अस्पतालहरूमा पिपिइ सेट लगायतका स्वास्थ सामाग्री सहयोग गरेका थियौं ।
रोजगार गुमाएका मजदुरहरूलाई खाना खुवाउने देखि हाम्रा सदस्यहरूको कोभिड बिमाकाे ५० प्रतिशत बहन गर्ने र कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने काममा सहजिकरण गरेका थियौं । यस पटक हाम्रो अभियानलाई थप विस्तार मात्र गरिएको हो ।
स्थानको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
ठाउँको लागि हामीलाई खासै समस्या भएन । सरकारले सुकम्बासी व्यवस्थापनको लागि बनाएको भवन प्रयोगकोलागि सर्वाङ्ग हस्पिटलले सम्झौता गरेर लिएको छ । त्यही भवनको एउटा ब्लक हामीले सर्वाङसँग सम्झौता गरेर संचालन गर्न लागेका हौं । यहाँ आवश्यक कोठा सहितको व्यवस्थित ठाउँ छ ।
आर्थिक, प्राविधिक लगायतका व्यवस्थापनको पाटोलाई एक्यानले कसरी हेर्दैछ ?
हामी आफैसँग केही फण्ड पनि छ र थप सहयोगको लागि आह्वान गरेका पनि छौं र केही संघसंस्थाहरूबाट प्रतिवद्धाहरू पनि पाएका छौं । बैंकर एसोसियसन, नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संघ, बिमा समिति लगायतसँग वजेट व्यवस्थापनको लागि एक खालको छलफल चलिरहेको छ ।
सुरुदेखि नै पूर्ण क्षमतामा संचालन हुने हो कि यसले समय लिन्छ ?
हामी सिलिन्डर व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छौं । अहिले कांग्रेस नेता प्रदिप पौडेलबाट ५० थान अक्सिजनको व्यवस्थापनको लागि पहल भएको छ, पहिलो चरणमा त्यसैबाट सुरु गरेर एक हप्तामा पूर्ण क्षमतामा जान्छौं ।
संख्याको हिसावले पनि ठूलो क्षमताको आइसोलेसनको योजना छ, कति चुनौती महसुस गर्नुभएको छ ?
यसलाई व्यवस्थित किसिमले संचालनको लागि हामीले स्थानीय तह लगायतका सरोकारवाला निकायसँग पनि समन्वय गरेका छौं । एक्यानको टिममा आफै सक्रिय भएर लागेको छ । प्राविधिक पाटो सर्वाङ्ग हस्पिटलले हेर्ने भएपछि हामीलाई सहज भएको छ ।
खानाको लागि क्याटेरिङलाई जिम्मा दिएका छौं, नियमित रुपमा खटिनको लागि कर्मचारी पनि नियुक्त गरेका छौं ।
अहिले मुख्य समस्या नै अक्सिजन व्यवस्थापनमा हो ।
अहिले बजारमा अक्सिजन सिलिन्डर किनेर पनि नपाइने अवस्था छ र भएका पनि एउटैको २५–३० हजारसम्म लागत लाग्छ । म सहयोग पुराउन सक्ने सहयोगी मनलाई सहयोगको अपिल पनि गर्छु ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि अन्य काम पनि गर्न सकिन्थ्यो, एक्यानले आइसोलेसनको योजना किन ल्यायो ?
भारतमा कोभिडको महामारी फैलिइसके पछि हामीले नेपालमा यो अवस्था आउनसक्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं । यसको तयारी हाम्रो अगाडि देखि नै थियो धातु व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर अक्सिजनको प्रवन्ध पनि गरिसकेका थियौं, आवश्यक अवस्थामा अक्सिजन दिने हाम्रो योजना थियो ।
हाम्रोमा एकाएक महामारी फैलियो, त्यस पछि हामीले नचलेर रहेका हस्पिटलसँग समन्वय गरेर आइसियू र भेन्टिलेटर सहितको बेडको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनायौं । त्यही अवस्थामा अक्सिजनको अभाव भएपछि हाम्रो स्रोतका अक्सिजन त्यता प्रयोगमा आए, अर्कोतिर तत्काल आइसियू, भेन्टिलेटर सहितको हस्पिटल व्यवस्थापनको संभावना देखिएन ।
त्यो अवस्थामा के हुनसक्छ त भन्दा यही नै उपयुक्त काम लाग्यो । किनकी कम जोखिमका बिरामीलाई हामीले सेवा दिएको अवस्थामा अरु जटिल खालका उपचारको लागि अस्पतालका बेड काममा आउँछन् र जटिलता कम भएका बिरामीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने लाग्यो ।
हामीले यसैबीचमा हाम्रा सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सल्लाहको लागि डाफें हेल्थ केयरसँग सम्झौता गरेर सेवा दिइरहेका थियौ। अहिले राष्ट्र महामारीमा फसेकोबेला सक्दो केही गरौं भन्ने लागेर यस तर्फ लागेका हौं ।
अन्य निकायसँग समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?
यो परियोजनाको सुन्दर पक्ष के छ भने यसमा अहिले चारवटा निकायको समन्वय बलियो गरि रहेको छ ।
यसमा सर्वाङ्ग हस्पिटल र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरिसकेको छ त्यसमा रहेर हामी गैर नाफामुलक संस्थाले काम गर्दैछौं, अर्को यो अवस्थामा यो समस्या सबैको हो भनेर राजनैतिक पृष्ठभूमी र योगदान पुराएको व्यक्तित्वको हामीलाई साथ छ ।
म अपिल पनि गर्न चाहान्छु, महामारीलाई परास्त गर्न सबै क्षेत्रका नागरिकले आएर सहयोग गर्नुस् । मानव जीवन सबैभन्दा महंगो र महत्वपूर्ण हुन्छ । मान्छेको ज्यान बचाउनु जस्तो ठूलो कुरा हुन्छ ।
आइसोलेसन गतवर्ष देखि संचालनमा आएका छन् तर देखिएको समस्या के छ भने त्यसमा सबैको सहज पहुँच भएको पाइन्न, आवश्यक भएकाले यसको सेवा नपाइने अवस्था आउँछ, यो अवस्थालाई कसरी चिर्ने ?
यसमा सबै क्षेत्रको समन्वय रहेको हुँदा त्यस्तो अवस्था आउँदैन अर्को तिर यसको व्यवस्थापनमा हामी बलियो गरि लागेकोले पनि कसैले पनि यो परियोजनाबाट सेवा लिन नपाउने अवस्था रहन्न ।
संक्रमित भएका व्यक्तिले हामीसँग सम्पर्क गरेर आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुन्छ । हामीले नियमानुसार १० दिनसम्म राख्छौं । आवश्यक सूचनाहरु विभिन्न माध्यमबाट प्रवाह गर्छौं ।